सातै प्रदेशमा कोल्डचेन बनाउँदै सरकार, कोभ्याक्सको खोप मार्च दोस्रो साताभित्र ल्याइने – Koshidaily
मुख्य पृष्ठसमाचारसातै प्रदेशमा कोल्डचेन बनाउँदै सरकार, कोभ्याक्सको खोप मार्च दोस्रो साताभित्र ल्याइने
सातै प्रदेशमा कोल्डचेन बनाउँदै सरकार, कोभ्याक्सको खोप मार्च दोस्रो साताभित्र ल्याइने
कोभिड–१९ विरुद्धको खोप भण्डारणका लागि सातै प्रदेशमा कोल्डचेन बनाउन ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले केन्द्रीय खोप भण्डारण केन्द्र टेकुसहित सातवटै पद्रेशमा कोल्डचेन बनाउने तयारी थालेको हो ।
दुई महिनाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेगरी ९ करोड लगानीमा कोल्डचेन निर्माण गर्न लागिएको हो । हाल स्वास्थ्य सेवा विभाग परिषर टेकुसहित ५ वटा प्रदेशमा कोल्डचेन सुचारु अवस्थामा छन् । अहिले नियमित रुपमा दिइरहेको १२ वटा खोप अभियानका लागि केन्द्र र प्रदेशका गरी ९ वटा मोबाइल भ्यानहरु प्रयोग गरिँदै आएको छ । कर्णाली प्रदेशमा भने नेपालगञ्जबाट खोप पठाउने गरिएको छ ।
कोभिड–१९ विरुद्धको पहिलो चरणको खोप सुर्खेतबाट प्लेनमार्फत् ढुवानी गरिएको थियो । त्यस्तै प्रदेश २ का ८ जिल्लामा हालसम्म हेटौंडाबाट र बाँकी जिल्लामा प्रदेश १ को राजधानी बिराटनगरबाट वितरण गर्दै आइएको छ । बाराको पथलैयामा नवनिर्मित कोल्डचेन पनि खोप भण्डारणका लागि तयार भइसकेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कहाँ–कहाँ बन्दैछन् नयाँ कोल्डचेन ?
सबै प्रदेशमा सकेसम्म अस्पतालहरुलाई पायक पर्ने स्थानमा कोल्डचेन निर्माण गर्न लागिएको शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसका लागि बोलपत्र स्वीकृत भइ विज्ञापन आह्वान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै प्रदेश २ को जनकपुरको वाग्मतीको हेटौंडा र काठमाडौंको टेकुमा नयाँ कोल्डचेन निर्माण हुनेछन् ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने ठेक्का सम्झौता भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बाँकी प्रदेशहरुमा पनि छिट्टै ठेक्का सम्झौता गरिने मन्त्रायले जनाएको छ ।
कोभ्याक्सको खोप मार्चको दोस्रो साता ल्याइँदै
विश्व स्वास्थ्य संगठनमार्फत् विश्वब्यापी खोप अभियान गाभी कार्यक्रमअन्तरगत उपलब्ध गराइने कोभ्याक्सको खोप नेपालमा मार्च दोस्रो साता ल्याउने तयारी भएको छ ।
खोप विभाग प्रमुख डा. झलक शर्माका अनुसार संगठनले नेपालमा मार्चभित्र उपलब्ध गराउने निश्चित भइसकेको छ । संगठनले पहिलो पटक हिजो (बुधबार) घानामा कोभ्याक्सको खोप पठाएको थियो ।
नेपाल सरकारकोतर्फबाट भने मार्च दोस्रो साता खोप ल्याउने तयारी गरिएको डा. गौतमले बताए । कोभ्याक्सअन्तरगत नेपालले निःशुल्क रुपमा आउने २२ लाख डोज खोप पाउने निश्चित भइसकेको छ ।